शारीरिक सुन्दरता बढाउन चाहनुहुन्छ? यि खानेकुराको सेवान गर्नुहोस। | Samajik Khabar
Home अन्य शारीरिक सुन्दरता बढाउन चाहनुहुन्छ? यि खानेकुराको सेवान गर्नुहोस।
शारीरिक सुन्दरता बढाउन चाहनुहुन्छ? यि खानेकुराको सेवान गर्नुहोस।
सुन्दर व्यक्तित्व भएका व्यक्तिको प्रभाव हरेक भेट वा परिस्थितिमा सकारात्मक हुन्छ । सुन्दर व्यक्तित्वका लागी मानिसको शारीरीक वनावटसँगै उसको शारीरीक सुन्दरता पनि आवश्यक हुन्छ ।
हरेक नेपालीको भान्सामा पाइने मेथीको सेवनले पेट सम्बन्धी रोगबाट छुटकारा दिलाउँछ । मेथी खाँदा पेट सफा हुनुका साथै छाला स्वस्थ र चम्किलो हुने गर्दछ । मेथी सेवन गर्दा छालाका रोगहरु लाग्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । मेथीको पात पिसेर टाउको धोएमा कपाल बलियो र चम्किलो हुने गर्दछ ।
तरकारी, अचारमा मात्र होइन सलादका रुपमा समेत मुलाको प्रयोग हुन्छ । मुलाको नियमित सेवन गर्दा रगत शुद्ध हुन्छ तथा डण्डीफोर आउँदैन । यदि एक महिनासम्म लगातार मुला खाउमा डण्डीफोर आउँदा अनुहारमा बनेका दाग हराएर जान्छन् । मुलाको रस र तिलको तेलको मिश्रण बनाई टाउको मसाज गरेमा कपाल र्झन कम हुन्छ ।
Previous articleभूकम्प पीडित लाभग्राहीले सरकारले दिने अनुदान लिन सम्झौता गर्ने समयसीमा मङ्गलबार सकिँदै
Next articleमंगलबार सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो